Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSwitzerland Imbali yaseRoma yaseBurki yobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yeBoldold yeBantwana
I-Biology yaseRoma yethu yaseBurki ikukhonza iinkcukacha ezigcweleyo zeBali lobuNcinci bakhe, uBomi bokuqala, uBazali, iiNqaku zeSapho, uBomi boNothando (Intombazana, Umfazi), uMntwana (uS), uLwazi ngobomi kunye noBomi boBuntu njl.
Ngamazwi alula, i-LifeBogger ikunika ukuhlukana ngokupheleleyo kweBali lakhe loBomi ukuqala ukusuka xa wayengumntwana, ukuya kuthi ga nini xa wayesaziwa.
Asides zokuba ulinqanda njl njl njl, mna nawe siyamazi, kanye UDavid de Gea uphakathi kwezona zininzi abagcini beepisi abashushu kwibhola yehlabathi-Ingxelo yombhali sele eqinisekisile oko.
Kwakhona, ayithandwa njenge Manuel Neuer or IKepa, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abaza kuba nomdla wokufunda i-Biography yaseRoma Burki esiyilungisileyo. Ngoku, ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Ibali lobuntwana laseRoma iBurki:
Kwabaqalayo bebhayiloji, igama lakhe lesidlaliso "Okumnandi", Wena soze azibize lonto. Igoli laseSwitzerland lazalwa ngomhla we-14 ku-Novemba ka-1990 kunina, uKarin Burki kunye noyise, uMartin Burki, eMünsingen- umasipala eSwitzerland.
Umncinci waseRoma weza emhlabeni njengonyana wokuqala kunye nomntwana owazalwa ngaphandle komanyano phakathi kwabazali bakhe abanothando. U-goalie wakhula kunye nomntakwabo omncinci ogama linguMarco Bürki. Bobabini abantakwabo, umahluko wobudala beminyaka emithathu, baba ngabahlobo abasenyongweni ukusuka ngosuku lokuqala.
Njengomntwana wokuqala kunye nonyana onomntakwabo omncinci, umRoma omncinci wayenaye, imvakalelo enkulu yoxanduva. Ukususela ekuqaleni, waqala ukudlala indima enkulu yomzalwana. Ewe, ukunyamekela uMarco yayiyimbopheleleko yakhe yokuqala njengomdala.
Njengoko ixesha lihamba, isithintelo sexesha elizayo saqala ukufudumala ukuze silandele urhwebo lwentsapho yaseBurki. Yintoni loo nto?
Imvelaphi yoLusapho yaseRoma:
Enkosi kwintloko yendlu (uMartin), ikamva labantwana bakhe lafumana ukukhuselwa ngokukhawuleza. Ngaba ubusazi?… IGoli laseSwitzerland (i-Roman Burki) livela kwimidlalo yosapho. Uyise, uMartin Burkii wayengumgcini wegoli kunye nonina, mhlawumbi ongumgcini wendlu.
Bobabini abazali bakaRome Burkii babesebenzisa ikhaya eliphakathi. Ngenxa yexabiso eliphantsi lokuphila, abakaze babhekane nengxaki yemali. Ngapha koko, usapho lukaMartin noKarin lwaluphakathi kwabemi baseMünsingen abangama-12,000 ababehlala kwenye yezo ndawo zintle zonxweme zaseSwitzerland.
Imvelaphi yosapho lwaseRoma iBurki:
Ukuya kwi-avareji yebhola ekhatywayo, unoGoli uvela eSwitzerland. Abanye abalandeli mhlawumbi abanalo nofifi lokuba usapho lakwaRome Burki lusuka eMünsingen, umasipala omi eSwitzerland. Qaphela, oku akunakuphikiswa kwidolophu yaseJamani, ekwabizwa ngokuba yiMünsingen.
Ukusuka kwimephu engezantsi, uyakuqonda ukuba iMünsingen yeyommandla wase-Switzerland eSwitzerland. Kulungile ukuthi iRoma Burki ngumSwitzerland-waseJamani kwaye abazali bakhe banolwimi lweAlemannic. Abantu abaphuma kolu lwimi baneengcambu zosapho lwaseJamani.
Iminyaka yaseRoma yaseBurki yokuQala- iMfundo kunye nokwakhiwa kwamakhondo omsebenzi:
IMünsingen kulapho yonke into enxulumene nokumiselwa kwakhe yaqala khona. Njengomntu obekade egoli, kwakunzima kuMartin Burki ukujongana nomhlalaphantsi ebholeni. Kwangoko, utata omkhulu wayenethemba lokubona oonyana bakhe, eqala ngowokuqala (ongumRoma), enqwenela ukuhlala amaphupha osapho lakwaBurki- ukuba ngumdlali webhola ophumeleleyo kunye ophumeleleyo.
Emva kokuxhoma iibhutsi zakhe, uMartin Burki wazithabathela ngokwakhe ukulungiselela oonyana bakhe ngekamva. Utata obone kwangaphambili, ngonyaka ka-1999, wabhalisa iRoma encinci neFC Münsingen (iklabhu yasekhaya ekufutshane nekhaya losapho). Apho, inkwenkwezi ye-BVB yexesha elizayo yabeka isiseko sayo sokugcina iinjongo.
I-Roman Burki Biography-Ubomi boKhathalelo kwaBafundi:
Ngo-2005, umqeqeshi oyintloko waseSwitzerland uKöbi Kuhn wayelifumene ilizwe okokuqala kwiNdebe yeHlabathi ye-2006 okwesihlandlo sokuqala ukusukela ngo-1994. Wonke umntu, kubandakanywa nosapho lukaRoma Burkii, babenemincili ngekamva lebhola ekhatywayo.
Amandla ebhola ekhatywayo eSwitzerland phakathi kwezinye izinto atyekise uMartin ukuba abhalise unyana wakhe kwiimvavanyo kwizifundo ezibalaseleyo. Ngaphandle kwethemba, izinto azizange zihambe ngaphambili njengoko zazicwangciselwe unyana wakhe- umgcini wegoli oselula.
URoman Burki kwafuneka ajamelane nokudana okuthile xa wayeselula. Imfuno yokuqhubela phambili kwizifundo ezibaluleke ngakumbi ayidlulanga, ngenxa yezilingo zebhola ekhatywayo. Phakathi kweeklabhu ezamsilela, eyona yabangela usizi kakhulu yiFC Thun, iqela lebhola laseSwitzerland elalivela kwidolophu yaseBernese Oberland eThun.
Ukubandezeleka kwiMpilo yeNgqondo kunye nendlela uTata wakhe alugcina ngayo uKhathalelo lolutsha:
Thina balandeli bebhola besingazukumbona kwisikipa se-BVB ukuba utata wakhe khange angenelele ngokuqesha umqeqeshi wengqondo owamncedayo wasusa ingqondo yakhe koxinzelelo lwebhola ekhatywayo. Inyani yile, UBurki wabanengxaki yengqondo, kwaye utata wakhe wasindisa inkathalo yakhe esemncincir.
Esi sigqibo esenziwe ngabazali bakaRome Burki sokuqesha umqeqeshi weengqondo sagcina amaphupha osapho ephila. Oku kwenzeka nethemba- umnxeba ovela kwiBSC Young Boys (iklabhu ephezulu yezemidlalo yaseSwitzerland esekwe eBern) eyamemela unozinti oselula wezilingo.
I-Roman Burki Biography-Indlela eya kwiNgxelo yoDumo:
Ubusazi?… Kwiiyure ezimbini ngaphambi kokuba ikamva elihamba nalo lihambe netyala lakhe kunye nabafana abancinci beBSC, owethu umRoma waguqukela kuyise, owayemqhubele kwindawo yovavanyo yeqela wathi, ngokwe-EuroSport.
Utata,… Hayi, andizukujoyina Amakhwenkwe aMancinci. Kutheni usithi HAYI? … Ubuze utata wakhe, uMartin.
U-Bürki uxelele utata wakhe ukuba ukwaliwa kwakhe ngaphambili kwi-FC Thun kwakumtyhafisile, kumenza angabinakho ukuqhubeka nomsebenzi. Ke, unika Abafana abancinci ukwala kwaye uyanikezela kwibhola ekhatywayo.
Ngombulelo, kuthathe umzamo odibeneyo wabazali bakaRome Burki kunye nabanye abathandekayo ukulungisa ingqondo yomfana omncinci ngaphambi kokuba athathe isigqibo sokuqhubeka nezilingo kumaBala aMancinci.
I-Roman Burki Biography-Rise to Fame Ibali:
Kuluyolo losapho kunye nabahlobo, igoli elincinci ladlula izilingo zabafana abancinci ngemibala ephaphazelayo. Ukusuka ngo-2005 ukuya ku-2008, uBürki wayekwi-academy yabo. Uthweswe isidanga ngo-2009 kwaye kwangoko wajoyina iqela eliphambili apho waqala khona ukwenza amadini amaninzi.
Ukuqhubeka ngemboleko-mali kunye nokudluliselwa kwiGrasshopper (enye iklabhu enkulu yaseSwitzerland) yayisesona sigqibo sasigqibeleleyo saseRoma. Nangona kunjalo, impumelelo yakhe ebalaseleyo yebhola eklabhu eSwitzerland yayinceda iqela lakhe leGrasshopper ukuphumelela iNdebe yeSwitzerland ngo-2013. Ukunceda iqela lakhe ukuba liphumelele, uBurki kwafuneka adlale ngombambo owaphukileyo kunye nesihlunu esiswini.
Le nto yakhokelela ekudluliseleni eJamani. Ngeli xesha, uRoman washiya ilizwe lakhe, abazali kunye nosapho okwesihlandlo sokuqala ukuba baye eJamani apho wajoyina khona SC Freiburg. Emva konyaka, ngo-2014, UTomas Tuchel wambiza eBorussia Dortmund. Ngexesha lokubeka i-biology ka-Roma Bürki, sele sele ephethe indebe ye-DFB yaseJamani igama lakhe.
Ukuphumla, njengoko sisoloko sisitsho, yimbali.
Roman Burki Buthanda Ubomi - Intombi, Mfazi, Bantwana?
Okokuqala nokuphambili, akukho nto iyiphikisayo into yokuba imbonakalo yakhe intle ayinakutsala amanenekazi anokuzazisa njengezintombi ezinokubakho kunye nezixhobo zomfazi. Ukwahlulela kumfanekiso ongezantsi, uya kuthanda ukwamkela igama lesidlaliso lakhe- Okumnandi. Kweli candelo, siya kukunika ukuhlukana kobomi bothando baseRoma Burki.
Xa ebuzwa malunga nombono wakhe umfazi ophuphayo, intombi okanye unkosikazi, u-Roman Burki uthethe ngokulandelayo I-Schweizer-illustrierte.
Andilukhethi uhlobo oluthile, kodwa kufanele ukuba lube nobuso obunentliziyo, kuba ukujonga ngokuqinisekileyo yinto yokuqala ebambe iliso lakho kwaye ivuse umdla.
Ndifuna umntu onomdla kum njengomntu not nje ngebhola.
IRoma Bürki Ukuqatshelwa kwembali- eyadlulayo kunye neNtombazana yaNgoku yeNkazana + yomfazi ukuba:
Okokuqala, unoGoli waqala waba nobudlelwane ngamanye amaxesha apha ngo-2010. Waqala ngokuthandana UNastassja Beutler, obonakala njengentombi yakhe yokuqala kunye nesithandwa sakhe. Bobabini badibana kwaye bathandana kwisikolo sokuqhuba eBern, eSwitzerland.
Emva kokufuduka kukaBürki ukuya eBVB, iingxaki zaqala phakathi kweentaka ezimbini ezinothando, hayi ngenxa yobudlelwane obude. Okulusizi, URoman Bürki wahlukana nentombazana yakhe yodidi ngo-2016 (ngokweNgxelo kaSten).
Amahemuhemu anokuthi emva kokuqhubekeka, iGoli elihle liqhubekile ukuya kumhla imodeli kunye blogger ebizwa I-Chiara Bransi- intombi yakhe yesibini.
Nangona kunjalo, ngeli xesha lokuvelisa i-Biology yaseRoma Burki, uMnu Handsome okwangoku unandipha ubudlelwane kunye nobuhle baseJamani ohamba ngegama UMarlen Valderrama-Alvaréz.
Ukusuka kuzo zonke izibonakaliso, kuyavela UMarlen unokuba ngumfazi waseRoma uBurki nonina wabantwana bakhe. Inenekazi elihle livela kwi-Jamani eseMazantsi, kwaye ungumntu owomeleleyo owabelana nabanye ngevidiyo ezisebenzayo kwi-Instagram.
UMarlen Valderrama-Alvaréz ubonakala esondele kakhulu kuCathy, ngubani Mat Hummels'mfazi. Kwakhona, uMelanie Windler, oyingubo yentliziyo yakhe UManuel Akanji.
Ubomi bobuRoma baseBurki:
Ewe, kusenokwenzeka ukuba umazile ngobuhle bakhe kunye nezo zibonakalayo ezibonakala ngathi ziimpawu eziqaqambileyo. Nangona kunjalo, into ongayaziyo yindlela yokuphila yaseRoma ubomi bakhe ngaphandle kwebhola okanye ubuntu bakhe kwi-pitch.
Okokuqala nokuphambili, unozinti unalo icala elithambile lezilwanyana nangona yena ezijongile kakhulu nangona eposini. Ukhe wakutsho okulandelayo kudliwanondlebe.
Xa ndifunda ngokufa kwebhere kwipaki yezilwanyana eBern, kwandivisa kabuhlungu. Kwakhona, umhlaba waphantse wawela kum xa enye yeekati zabazali bam yayiswelekile.
Njengabanye babathandi bezilwanyana abathanda izilwanyana, umgadli weBVB unenja encinci ambiza yona nguCliff. Ukuba akafundi iincwadi kwaye umamele i-podcasts, umRoma kungenzeka ukuba unenja yakhe.
Malunga neNkangeleko yakhe entle / eyoBukeka:
Ngaphandle kwamathandabuzo, owaseSwitzerland ngoyena mntu uthanda ezona njongo zinhle kwisizukulwana sakhe. Kwakhona kubomi bakhe bobuqu, u-Roman Burki uthatha ingqalelo enkulu, ukubonakala kwakhe nokuba kukudubulo okanye ixesha ngalinye elishiya ikhaya. Ngamazwi akhe;
Ndifuna ukubonakala ndiziphethe kakuhle xa ndikwisidlangalaleni. Ngaphambi kokuba ndiphume endlwini, ndiye ndazijonga esipilini. Kodwa oku kunokuba njalo ngomntu ngamnye webhola kule mihla.
Okokugqibela, kubomi bakhe boBurki, umntu waseSwitzerland uyayithanda into yokuba aye kwishishini lokuthengiswa kwezindlu xa exhoma ibhutsi yakhe. I-Roman Burki ikhetha Mats Hummels inokuba liqabane lakhe elifanelekileyo leshishini.
Ubomi boBuntu baseRoma Burki:
Umvuzo wenyanga we-BVB we- € 200,000 kunye nomvuzo osisiseko we- $ 2.77 yezigidi ungaphezulu kokwenza uMxhamli aphile ubomi obutofotofo. Ukucacisa indlela yokuphila yaseRoma uBurki, siza kukuxelela kuphela ngeemoto zakhe kunye nexabiso elifanelekileyo. Ngoku masiqalise ngeemoto zakhe.
Iimoto zikaRhulumente waseRoma iBurki:
Inyani yile, amaSwitzerland anendawo ethambileyo yamavili apholileyo kwaye amakhulu. URoman Burki ukhetha ukunxiba ukumadanisa neeMercedes Benz G-Class zaseSVV. Ukukhethwa kwemoto kuxhomekeke kwimodi yakhe yokunxiba, kwaye imoto nganye inokuqala kwayo kunye nomhla wokuzalwa kuma-nameplates abo.
I-Roman Burki net Worth:
Ngaphandle kwamathandabuzo, umvuzo wakhe we- $ 2.77 ezigidi uhlawulwe ngonyaka ukususela ngo-2017. Ukujonga ixesha lakhe lokugqibela lesivumelwano sikaJuni 7, ngokuqinisekileyo elixabiso liya kunyuka.
Ubomi boSapho baseRoma eBurki:
Ukususela kwimizuzu yakhe yokuqala yobomi bakhe, u-Roman Burki uxhomekeke kumama wakhe kunye noyise, kunye nomntakwabo omncinci, uMarco ngenkxaso. Imifanekiso engezantsi yintsapho yakhe esondeleleneyo njengoko bezonwabele ukudubula kwikhaya labo laseSwitzerland- apho yonke into yaqala khona.
Ubomi boSapho baseRoma uBurki. Umzi osondeleleneyo uyonwabela isithabathaba semifanekiso ekhayeni labo- indawo apho yonke into (impumelelo) iqale khona. Kweli candelo leemvakalelo, siza kukuxelela ngakumbi ngabazali baseRoma uBurki kunye namalungu osapho. Ngoku, masiqale ngotata wakhe, uMartin.
Malunga noTata waseRoma waseBurki:
NgokwaseSwitzerland, utata wakhe uMartin wamnika esona sipho sigqibeleleyo nabani na owakha wanika unyana okanye othandekayo. Esi sipho asinto ngaphandle kwesenzo sokukholelwa kuye, ngakumbi ngexesha eliphantse layeka ukufuna ukuba ngumgcini wegoli.
Ngaphandle kukaTata waseRoma waseBurki- uMartin, umsebenzi ngewungekhe ube nakho. Ubonakala esondele kakhulu kunyana wakhe. UMartin, luhlobo lukatata okuthi nangona unyana wakhe ephumelele, asitsalele umnxeba ukuhlalutya iindawo ezingwevu kwimidlalo yakhe.
Malunga noMama waseRoma uBurki:
Umama omkhulu uvelise oonyana abaphumeleleyo, kwaye uKarin akayona. URoman khange athethe ngomamakhe, ngekhe alibale ukuthumela imifanekiso yakhe ngexesha lomama. UKarin Burki wenza eyona nkumbulo yakhe ibalaseleyo yobuntwana, ebulela ngenkathalo enkulu awamnika yona ngelixa wayesengumntwana.
Malunga noMzalwana waseRoma uBurki:
UMarco Bürki, Uzalelwe ngomhla we-10 kaJulayi ngo-1993 kwaye ungumdlali webhola waseSwitzerland odlala njengeziko lasekhohlo-ngasemva. Njengoko ndibhala le bio, owokugqibela wosapho lwaseBürki udlala ibhola yakhe kwiFC Luzern, iklabhu yezemidlalo kwidolophu yaseSwitzerland eLucerne.
Ngokungafani nomntakwabo omkhulu, uMarco Burki akanguye ithandwa, kwaye ayinguye owondla usapho. Nangona kunjalo, ukulandela emanyathelweni katata wakhe kunye no-bhuti omkhulu, u-Roman umenze waphumelela. NjengomRoma, uMarco naye wajoyina Abafana abancinci, ukuya kuthi ga ngoku ephumelele i-2017/2018 Super League kunye neklabhu.
Iinyaniso zaseRoma zaseBurki:
Ewe, kusenokwenzeka ukuba uyawazi amaSwitzerland njengegqala elihle nelisisithethi esakha sanceda i-BVB ukuba ibeke umngeni ecaleni kweBayern Munich. Kweli candelo, siza kukuxelela iinyani ezincinci ezaziwayo zaseRoma Burki. Ngoku masiqale.
Inyani # 1- Wayelilixhoba lokuhlaselwa kwebhasi ye-BVB- Indoda enoxanduva lokufumana iminyaka eli-14:
Ngo-2017, uSergei Wenergold wenza okungathandekiyo. IJamani yemvelaphi yosapho lwaseRussia yafihla iibhombu ezigcwele izikhonkwane zentsimbi, ukubangela uloyiko kubadlali beBVB. Ngelishwa, ibhombu esecaleni kwendlela ihambe njengebhasi yeklabhu eyayineRoma Burki, yadlula ngendlela eya kumdlalo wamanqam we-Champions League.
Nangona kungekho bomi balahlekileyo, kodwa bekukho ukulimala ezimbini. I-Roman Burki yafumana iingxaki zokulala iintsuku emva kokuqhuma. Sibulela kakhulu kuThixo ngokusinda kwakhe.
Inyani # 2- Isizathu ngasemva I-tattoos yaseRoma yaseBurki:
UmSwitzerland ufumana iiTattoos ezintle ezininzi, ezifaka isandla kubuhle bakhe. Nokuba awuqwalaselanga ngononophelo, uyakuqonda ukuba umzimba wakhe onetoni unobugcisa obuninzi bomzimba. U-Roman Burki ukhe wakutsho oku, xa ebuzwa ukuba kutheni enomdla kwi-tattoos. Ngamazwi akhe;
Ndikwii-tattoos kuba ukuya kwisandi; kufuneka sisuse yonke imisesane kunye neentsontelo. Ubugcisa bam bomzimba yinto yam yobucwebe.
Mandulo, xa wayekwishumi elivisayo, abazali bakaRoman Burki bamnika imvume yokuzoba. Ngezi ntsuku ebudaleni, akabuzi uluvo lwabo. Umdlali webhola waseSwitzerland unethemba lokususa ezinye zeempawu zakhe xa kuvela itekhnoloji engenabuhlungu- ecinga ukuba iya kuza kwixesha elizayo.
Inyani # 3- Inkolo yaseRoma i-Burki:
Phakathi kweetato zakhe, kukho uMariya noYesu emabunzini. Oku kubonakalisa ukuba abazali baka-Roman Burki mhlawumbi bakhuliswe banamathele kwinkolo yamaKatolika yenkolo yobuKrestu. UmSwitzerland ukhe waphendula xa ebuzwa ukuba uya ecaweni veki nganye. Ngamazwi akhe;
Andiyi ecaweni veki nganye. Kodwa ndiyakholelwa kwimigaqo ethile, ngakumbi enye ethi kufuneka ubaphathe abanye ngendlela ofuna ukuphathwa ngayo. Kwakhona, isibakala sokuba kukho umvuzo wokwenza okuhle.
Inyani # 4- Ukwahlulwa kwemivuzo xa kuthelekiswa nomntu ophakathi:
Ukufumana umvuzo eSwitzerland Franc (CHF)
Ngonyaka 2,944,087 CHF € 2,765,208 £ 2,503,799 $3,091,941
Ngenyanga 245,341 CHF € 230,434 £ 208,649 $257,662
Kwiveki nganye 56,530 CHF € 53,095 £ 48,076 $59,369
Ngosuku 8,075 CHF € 7,585 £ 6,868 $8,481
NgeYure nganye 336 CHF € 316 £ 286 $353
Ngomzuzu 5.6 CHF € 5.2 £ 4.7 $5.8
NgeSibini 0.09 CHF € 0.08 £ 0.07 $0.09
Le yinto kaRoma Bürki uzuze ukusukela oko waqala ukujonga eli phepha.
Ubusazi?… UmJamani oqhelekileyo ofumana i-3,770 yeuros ngenyanga kuya kufuneka asebenze ubuncinci iminyaka emihlanu kwaye Inyanga enye ukwenza iBurki yeBVB umvuzo wenyanga we- € 230,434 (izibalo zika-2019).
Okwesibini, apho usapho lakwaRoma iBurkii luvela khona (eSwitzerland), ummi ophakathi ofumana i-6'502 CHF uyakufuna ukusebenzela emithathu iminyaka kwaye Inyanga enye ukwenza umvuzo wakhe wenyanga olingana ne-245,341 CHF.
Imibuzo ye-Biographical Biquical yaseRoma
Igama eliphelele: IRoma Bürki.
Igama lesiqhulo: Iselula.
Wazalelwa: Ngomhla we-14 kuNovemba ngo-1990 eMünsingen, eSwitzerland.
Bazali: UKarin Burki (umama) noMartin Burki (utata).
Umvelaphi wosapho: I-Swiss-German yase-Alemannish dialect.
Ba zalwana: Umzalwana ogama linguMarco Bürki.
Ubuhlobo obudlulileyo: UNastassja Beutler noChiara Bransi (Ex-Grilfriends).
Umfazi: UMarlen Valderrama-Alvaréz.
Ukuphakama kwimitha kunye neenyawo I-1.88 yeemitha okanye i-6 ft 2 inches.
Ukuzilibazisa: Kufundwa iincwadi kwaye umamele i-podcasts.
IMfundo yeBhola ekhatywayo: I-FC Münsingen kunye nabafana abancinci.
Imodeli yoVavanyo lweTato: USergio Ramos.
Imodeli yeNdawo yeBhola: UManuel Neuer.
Ngamafutshane, sifunde ukuba abazali bakaRoma Burki (ngakumbi utata wakhe) sesona sizathu sokuphumelela kwakhe namhlanje. Eli nqaku lisifundisa oko Abaphumeleleyo abayi Kuyeka, kwaye amaQinisekiso soze aphumelele. Siyathemba ukuba uyonwabile. Ukuba unakho, sicela usixelele ukuba ucinga ntoni malunga nenqaku lethu kunye nomntu osibekele iinjongo kwicandelo lokuphawula.
Umhla oLungisiweyo: nge-4 kaSeptemba ngo-2020
I-Ciro Immobile Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
URobert Lewandowski Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oguqulweyo: Epreli 19, 2019